Kusarudza calibrator. Kana chinhu chikuru kuri kurongeka, kugadzirwa uye kuremekedza chigadzirwa - "Potato Sisitimu" magazini
Kusarudza calibrator. Kana kunyatsoita, kugadzirwa uye kuremekedza chigadzirwa ndicho chinhu chikuru
в Unyanzvi / Tekinoroji, Kavha michina
Kucheka inzira yekuyera rwizi rwechigadzirwa uye chikamu chakakosha chekubata mushure mekukohwa. Zvibereko nemiriwo zvehukuru hwakaenzana zviri nyore kurongedza, kurongedza, kuita, kuchengetedza uye, chokwadika, kutengesa.
Ware mbatatisi inowanzo kurongwa muzvikamu zvitatu: diki - kusvika 40 mm dhayamita, yepakati - kubva pa40 kusvika 60 mm, uye yakakura - inopfuura 60 mm.
Paunenge uchirongedza mbeu, huwandu hwehukuru hwehukuru hwakakura, semuenzaniso, anotevera akasiyana anogona kusiyaniswa: asingasviki 25 mm, 25-30 mm, 30-40 mm, 40-50 mm uye anopfuura 50 mm.
Pakutanga, kuongororwa kwezvigadzirwa nechuru kwaiitwa nemaoko kana nerubatsiro rwezvigadzirwa zvakagadzirwa, zvinoenderana nesisitimu yekupfuudza iyo tuber kuburikidza nemakomba akasarudzika emusero.
Nhasi, kana kumapurazi mazhinji (kunyanya kune ayo anoshanda nemaketeni ezvitoro) kumhanyisa uye kurongeka kwekugadzirisa kwakakosha zvakanyanya, varimi vari kuyedza kugadzirisa michina iyi.
Sarudzo hombe ye calibrators inoiswa pamusika wemazuva ano wemuchina, uyo unobvumidza wega wega mugadziri wezvekurima kuti asarudze yavo yakanaka modhi inosangana nezvinodiwa mukugadzirwa, kuvimbika, kuremekedza mbishi zvigadzirwa, nezvimwe.
Tichatarisa pane kuongororwa kwemaficha uye zvakanakira iyo SDe ine simba calibrator (kugadzirwa: SKALS, Denmark), modhi: SD 1000 / SD 1400 / SD 1800 / SD 2400.
Simba rekushandisa t / awa 15 22,5 30 40
Huwandu hwezvikwata zera 3-4-5 3-4-5 3-4-5 3-5
Power Consumption kV 1,5 / 3 / 3 1,7 / 3,4 / 3,4 2 / 4 / 4 3 / 6
Nesefa upamhi mm 1000 1400 1800 2400
Muchina uyu unoshandiswa kurongedza mbatatisi, hanyanisi, beet.
Nheyo yekushanda kukatyamadza: chigadzirwa chakakandirwa, chinotendeuka mumhepo uye chinowira mukati megate nerutivi rudiki kwazvo. Kureba uye kuwanda kwehops zvinogona kugadziridzwa kuti zvive zvakakwana kuita uye kuenzanisa kwakaringana. Iyo giya mota inodzorwa ne frequency frequency inoshandiswa senzira yekutyaira.
SDe calibrator inosiyana kubva kune akasiyana maanalog mune kudzikama: inoshanda pasina kukundikana, zvisinei nehuwandu hwemaawa ekushanda uye vhoriyamu yekurodha. Iyo muchina ine yakaganhurirwa nhamba yezvikamu zvinofamba, zvinoshanda sechivimbiso chekuwedzera chekuvimbika.
Iwo masefa akarongedzwa mumatanho maviri, nekuda kwekuti module yega yega inogona kubata matatu marudzi ezvikamu.
Mushini unoshanduka nyore kuti ushande nezvigadzirwa zvemhando dzakasiyana Varimi vane ruzivo nemhando dzakasiyana dzemacalibrator vanonyatsoziva kuti mangani matambudziko ekurongedza mhando dzakareba dzembatatisi dzinogona kukonzeresa: sekutonga, tubers dzinogona kumira kana kupfuudza divi radzo rakareba kuburikidza neseeve dzese (zvigadzirwa zvakarongedzwa nenzira iyi hazvikwane izvo zvinodiwa emaketani ezvitoro). Varidzi ve SDe calibrator havatarisane nematambudziko akadaro: saizi huwandu hwesefu hwakafara kwazvo, ivo vanogadzirwa mukuwedzera kwe1 mm, iyo inobvumidza iwe kusarudza sarudzo dzakakodzera chero giredhi, ingangoita nguva dzese. Uye kana icho chigadzirwa chikanamatira, iyo ejection sarudzo inokonzereswa: iyo calibrator zvinyoronyoro inoburitsa iyo tuber ichishandisa yakakosha scraper.
Nenzira, sieve yeiyo SDe calibrator inogadzirwa yakasimbiswa rabha, nekuda kweizvi, izvo zvigadzirwa hazvikuvadzike panguva yekugadzirisa maitiro (kana uchishandisa macalibrator nesimbi sesefu, kukuvara kwetuber hakugone kudzivirirwa), nepo massefu anonyatso chengetedza chimiro chavo. , usagwadama uye usanamatira kune tsvina (mune misiyano pakati pemasefa akagadzirwa chete nerabha).
Mukana mukuru weiyo SDe calibrator zvakare iri yekukurumidza uye yakapusa kutsiva yemasefa: maitiro anotora nhanho imwe kana maviri, chaizvo mumasekondi makumi maviri kusvika makumi matatu.
Iyo calibrator idiki muhukuru, zvichiita kuti zvive nyore kusanganisa mumitsara iripo. Asi pachikumbiro chemutengi, muchina unogona kudzoreredzwa nekugadzira iwo ega ma conveyors, funnels, fall absorbers, nezvimwe.
Inoshanda chinyararire (tichienzanisa neanofananidza).
Ese SDe Calibrator mamodheru akagadzirwa ne touchscreen control mapaneru, ichiita kuti ive intuitive kumisikidza, kuongorora uye kushandisa muchina.
Mibvunzo yekuwedzera nezve SDe calibrator, pamwe nemimwe michina yekugadzirira-pre-kutengesa uye kurongedza kwe "borsch set" zvigadzirwa, zvinogona kubvunzwa kumutungamiriri we "Packaging Equipment" department reAgrotrade Company Mikhail Afarinov:
Nzvimbo yekugovera yezvigadzirwa zvekurima ichavakwa mudunhu reMoscow